Rahonana ho atolotra an’i Thailandy, nangataka hialokaloka ao Kanadà ilay Laosiàna mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2022 8:01 GMT
Laosiàna mpikatroka, Khoukham Keomanivong (Sary natolotry ny RFA Asia), Fizakamanana © 1998-2020, RFA. Fampiasàna nahazoana alàlana avy amin'ny Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036.
Efa ho volana roa taorian'ny nisamborana azy tao Bangkok Thailandy, sy nandrahonana azy horoahana, ny 11 Martsa 2022 ilay Laosiàna mpikatroka, Khoukham Keomanivong, no tonga tao Kanadà, hitady fialokalofàna.
Khoukham dia isan'ireo nanangana ny Free Laos, tambajotra iray misy ireo Laosiàna mpiasa ao Thailandy mitolona ho an'ny zon'olombelona ao amin'ny firenena niaviany. Ny 29 Janoary, nosamborin'ny manampahefana tao Thailandy izy fa hoe nanitsakitsaka ny fepetra momba ny “visa” nomena azy, saingy andro telo taorian'izay dia navotsotra izy rehefa nandoa sazy, noho ny fanampiana ara-pitsaràna nataona mpisolovava iray miasa manokana momba ny zon'olombelona.
Saika nanameloka ny nisamborana azy daholo ireo fiarahamoninan sivily manerana an'i Azia satria izy dia fantatra amin'ny fomba ôfisialy eo anivon'ny United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) fa mpangataka fialokalofana. Nozaraina be teny anaty media sôsialy ny tantaran'i Khoukham sy ny sata maha-mpitady fialokalofana azy mba hanerena ireo manampahefana ao Thailandy hampitsahatra ireo dingana fandroahana azy. Napetraka ny fanakantsakànana ny fivezivezen'i Khoukham na teo aza ny fanafahana azy tamin'ny 1 Febroary.
FANAIRANA: #Thailandy: Laosiàna iray mpikatroka sy mpitady fialokalofana no tandindonin'ny fandroahana amin'ny ora tsy ampozina ao #Laos. Nosamborin'ny pôlisy tamin'ny 29 Janoary tao Bangkok i Keomanivong Khoukham, mpikambana iray avy ao amin'ny Free Lao, vondron'ireo mpandala demaokrasia miaina an-tsesitany – Nentina nankany amin'ny fitsaràna tao Don Mueang Kwaeng tamin'ity maraina ity pic.twitter.com/vM7RyMiGln
— AG (@ag_fidh) 31 Janoary 2022
Nohitrikitrihan'i Khoukham fa tsy nandray anjara velively tamina hetsika pôlitika izy tato anatin'ny taona roa farany, araka ny takian'ny UNHCR fony izy naharay ny karatra maha-mpitsoaponenana azy. Mihevitra izy fa misy olona nitorotoroka azy fahatany tany amin'ireo manampahefana ao Thailandy tamin'ny alàlan'ny fandefasana ireo lahatsorany efa taloha niresahana olan'ny zon'olombelona, nalaina tao amin'ny media sôsialy. Mampivarahontsana azy ny eritreritra hoe horoahana hody, izy sy ireo mpanaradia azy, satria mety hitarika sazy an-tranomazina mandritra ny fotoana maharitra izany noho ny governemanta ao Laos fantatra fa mpanasazy henjana an'ireo mpanohitra.
Tamin-kafaliana no nandraisan'ireo mpanao adisisika momba ny zon'olombelona ny vaovao momba ilay fahatongavan'i Khoukham tao Vancouver.
Vaovao tsara! Nandao an'i Thailandy ilay Laosiàna mpitady fialokalofana, Khoukham Keomanivong & tonga soa aman-tsara ao Kanadà. “Faly aho fa navela izy handeha, saingy indrisy tsy tokony notazonina velively mihitsy izy rehefa tsy nanao hadisoana” hoy ny @hrw #Laos #LPDR https://t.co/LGIWnVjO0k
— Phil Robertson (@Reaproy) 14 Martsa 2022
Andro vitsy taorian'ny nahatongavany tao Kanadà, tao anaty antsafa iray ho an'ny fampielezampeo Free Asia, Khoukham dia nozarainy ny fahamaivamaivànany afaka indray miteny sy mivezivezy malalaka.
…ny zavatra manandanja indrindra dia tsy maninona aho ary anaty firenena iray malalaka ankehitriny. Heveriko fa tsy hisy olona hamepetra intsony ny fahalalahako.
Nampiany fa tsy ho ela izy dia ho afaka hanomboka indray hiresaka momba ny toedraharaha mahazo ny zon'olombelona ao Laos:
Ao anaty foko lalina ao, dia tsy miova aho, ary na aiza na aiza firenena iainako, malalaka na tsia, hanohy hatrany aho hiresaka sy haneho hevitra momba ny firenena nahaterahako. Heveriko fa zo fototra maha-olona izany. Mety hivoaka aho indray andro any ary ho be kiana lavitra noho ny tany aloha, satria eto Kanadà, tsy tokony hatahorako olona intsony. Zontsika ny miteny.
Khoukham no Laosiàna voalohany mpitady fialokalofana no sady mpikatroka nofonjaina tao Thailandy. Ny sasany nanjavona tamin'ny fomba misitery raha mbola teo am-piandrasana ny ho fametrahana azy any amina firenena hafa. Naneho ny ahiahiny ireo vondrona mpiaro zon'olombelona momba ny fitomboan'ireo trangam-pisamborana sy fanjavonan'ny mpanohitra izay mitady fialofana any Thailandy. Mpitady fialofana pôlitika avy any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina izy ireny, toa an'i Laos, Kambôdza ary Vietnam. Ny governemanta tohanan'ny tafika ao Thailandy, izy tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2014, dia voampanga ho miaraka miasa amin’ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ao Azia Atsimo-Atsinanana amin'ny fampodiana ireo mpikatroka sy mpialokaloka. Vitan'i Thailandy ny mandroaka mody ireo mpangataka fialokalofana ho toy ny mpifindramonina tsy ara-dalàna satria izy tsy ao anatin'ilay fifanarahana momba ny mpitsoaponenana tamin'ny 1951.
Làlan-tsarotra no nodiavin'i Khoukham, izay nitondra azy avy any Laos nankany Thailandy ary ankehitriny ao Kanadà. Nefa mbola manana vintana ihany izy satria afaka nandositra ny zavatra nanjo ireo namany mpanohitra tsy hita nanjavonana, na tao Thailandy , na tao Laos. Mitohy any Kanadà ny làlana diany sy ny fitadiavany ny rariny.